Qariirad qowmiyadaha iyo doorashada Kenya - BBC Somali - Warar
Qariirad qowmiyadaha iyo doorashada Kenya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 1 Maarso, 2013, 17:39 GMT 20:39 SGA
Kala firirsanaanta qowmiyadaha
Kenya waxay galeysaa doorasho guud, oo dadka qaarkii ay ka cabsi qabaan in ay soo noqoto rabshadihii dalka dhan ka dhacay kadib doorashadii 2007. Dadka Kenya oo ah 42 milyan oo qof waxa ay u kala qeybsan yihiin in ka badan 40 qowmiyado iyo luqado kala duwan, qaar bandanna waxay u codeynayaan qaabkaas qowmiyadaha. Beelaha qaarkood ayaa collaad oo dhinaca dhulka, biyaha iyo xoolaha ka dhaxeysaa taasi oo mararka qaar keenta isku dhacyo la isku dilo.
Natiijada doorashadii 2007
Siyaasiyiin badan ayaa dareensan in jidka awoodda loo maro uu yahay isbahaysi qowmiyado. 2007 Xisbiga ODM ee Raila Odinga waxaa si weyn u taageerayay beesha Lou, qowmiyadaha ay deriska yihiin Luhya, Kalenjins iyo kuwo kale. Qowmiyadda ugu ballaaran Kenya ee Kikuyu waxay aad u taageerayeen PNU iyo Madaxweynaha Kikuyu Mwai Kibaki, halka ODM-Kenya ee Kalonzo Musyoka ay si ballaaran u taagerayeen dadkiisa Kamba ee koonfurta iyo bariga Nairobi.
Rabshadihii doorashada kadib 2007
Doorashadii kadib, taageerayaasha ODM waxay ku eedeeyeen PNU inay ku shubatay codadka, waxaana ay bilaabeen banaanbaxyo. Tani markiiba waxay isku beddeshay rabshado iyo in la is weerarro, gaar ahaan meelaha dadku aadka ugu badan yahay ee la is dhex degannaa Dooxada Rift, halkaasi oo Kikuyu iyo Kelinjin ay dhulka isku heysteen. 35 Kikuyu ah ayaa nolosha lagu gubay kaniisad ku taal Eldoret. Waxaa kale oo jirau iska horimaadyo lagu dhintay Naivasha iyo Nakuru.
In ka badan 1,000 qof ayaa la dilay, iyadoo 600 oo kun ay ka qaxeen guryahoodi. Shan sano kadib, UNHCR waxay ku qiyaaseysaa in 100 kun oo qof ay weli ku nool yihiin xeryo teendhooyin oo ku yaal dalka oo dhan. Iyadoo weli ay xusuustaasi taagan tahay, dadka qaarkii waxay ka cabsi qabaan in 4-ta Maarso doorashooyinka ay keeni karaan rabshado cusub, sidii la arkay doorashooyinkii xisbiyada dhexdooda ee sanadka horraantiisi.
Musharraxa Madaxweynenimada Uhuru Kenyatta iyo saaxiibkii –William Ruto – ayaa waxa ay hor imanayaan Maxkamadda Caalaamiga ee Dambiyada bisha Abriil iyadoo loo heysto dambiyo ka dhan ah bini’aadanimada. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inay taageerayaashooda ay isku uruuriyeen rabshadihii dhacay doorashadii u dambeysay. Mr Ruto qowmiyaddiisa Kalenjin waxa ay taageereen Raila Odinga 2007, laakiin dhinaca kale ayuu u wareegay. Labada ninba waxay beeniyeen eedeymaha loo soo jeediyay.